Archive du 20180519
Fivondronamben`ny antoko Tsy tokony ho filoha intsony Rajaonarimampianina
In-dimy nandalo krizy goavana ny firenena Malagasy tato anatin`ny 46 taona. Miara-miaiky kosa ny rehetra fa tsy mipetraka araka izay tokony ho izy ny rafitra sy ny fitantanana misy eto amin`ny firenena amin`izao fotoana.
Depiote ho an’ny fanovana “Tsy haharava ny tolona ny teti-dratsinareo”
Vao maraina omaly, dia tonga mangingina nanatitra ny “mémoire en defense” na fiarovan-tenan’ny filoha manoloana ny fitoriana azy ny mpisolovava azy notronin’ny parelemantera mpanohana ny fitondrana.
Rajaonarimampianina Nivoady tamin’ny doany, hoy i Tinoka Roberto
Tany Ambato Boeny ny filoha Hery Rajaonarimampianina nitokana fotodrafitrasa momba ny fahasalamana ary nandalo tao Madirovalo nihaona sy nihaino ny hetahetan’ny mponina, raha ny fampitam-baovao.
Tolon’ny 13 mey Niavaka ny fidiran’ny TIM teny an-kianja
Ao anatin’ny heriny tanteraka ny antoko Tiako I Madagasikara na ny TIM amin’izao fotoana, indrindra ny tolona eny an-kianja misy ankehitriny.
Fikambanan’ny ben’ny tanàna kaominina ambanivohitra “Atsaharo ny ramatahora atao amin’ny depiote
Manatanteraka fivoriana mandritra ny roa andro eny Talatamaty ny fikambanan’ireo Ben’ny tanàna eny anivon’ny kaominina ambanivohitra nanomboka omaly, tarihin’ny filohany, Rado Razafindratsimba Ben’ny tanànan’ny kaominina Talatamaty.
Fampihaonana ny filoha 4 Manjavozavo ny vahaolana entiny
Fandaharam-potoanan-dry zareo avy eo anivon’ny komitin’ny fampihavanana malagasy na ny CFM ny hampihaona ireo mpitondra fanjakana miisa 4 teto amin’ny firenena izay heverina ho manana rohy amin’ny toe-draharaha ankehitriny.
Mpanao politika mikendry seza Manomboka hita taratra indray
Tsy zava-baovao fa efa zary fomba fanao politika eto amintsika mihitsy ity mifamorivory amina toerana iray anaty vanim-potoam-pitolomana ity isaky ny misy hetsika mafampana toy izao ankehitriny izao.
Fa inona kay ilay tena mampiziriziry ? Efa tsy misy mpitia intsony anefa mbola mikiry. Fa inona loatra re no tena mahafatifaty ? Na ny fahefana hananana aza efa miha lo sy lany daty.
Diaspora Kristianina Malagasy Nitondra fampaherezana ho an’ny firenena
Namoaka fanambarana ny avy amin’ny Diaspora Kristianina Malagasy na ny DKM, izay manana ny foibeny any Paris Frantsa manoloana ny toe-draharaha mafana sy ny olana mahazo ny firenena Malagasy amin’izao fotoana.
Startup Weekend Fianarantsoa Hanome sehatra hatrany ny fandraharahana
Omaly zoma 18 mey no nampahafantarina tetsy amin’’ny EDBM (Economic Development Board of Madagascar) ilay hetsika maneran-tany “Startup Weekend” momba ny fandraharahana.
Fitokonana ZAP 19 isa amin’ireo 1787 ihany no misy sekoly sahirana, hoy ny minisitera
Mihamitombo hatrany tato ho ato ireo mpianatra mandeha mitokona milanja sorabaventy manatevina ny tolon’ireo solombavambahoakan’ny fanovana 73 mianadahy etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey. Anisany ireo mpianatry ny CEG avy any Ambatomirahavavy, Ambohimanarina ary Nanisana.
Famonoana ilay “surveillant” Mpianatra 3 no tena nidaroka mafy azy
Telo lahy no nohazavain’ny vadin’ny Surveillant an’ny Lisea Rabearivelo fa tena tompon’antoka amin’ny fahafatesan’ilay rangahy.
CNaPS – FLM Nidina tany Betroka nanofana momba ny fiahiana ara-tsosialy
Nahazo fampiofanana avy amin'ny CNaPS ireo lehiben’ny sampandraharaha maro ny FLM Betroka. Taorian'ny fifanaraham-panaovan-tsonia teo amin'i Dr Rakotonirina David,
Raharaha METM Hitory ny fokonolona
Nanda tsy handray ireo taratasy fitarainana sy fitoriana nalefan’ireo mpandray fanasan’ny Tompo ao amin’ny METM Zoara Antohomadinika sy ny fokonolona ao an-toerana ilay rafitra farany nanankinana izany na ilay Soba komity.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Menakely Ruphin Sady lalao no asa ny fanaovana fanatanjahantena
Hiverina eo amin’ny tontolon’ny baolina kitra ny pejin’ny Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy eto amin’ny gazety Tia Tanindrazana anio sabotsy 19 mey ka hampahafantatra misimisy kokoa ny amin’ny mpanao baolina Menakely Ruphin isika, araka ny tafatafa nifanaovana taminy.
AT2B 10 taona isika izao Hitohy anio sabotsy 19 mey ny fifaninanana basikety
Hitohy eny amin’ny kianja filalaovana basikety eny Andraisoro anio sabotsy 19 mey ny fifaninanana basikety tafiditra ao amin’ny hetsika Fety de Basket fanamarihan’ny fikambanana AT2B Andraisoro Tia
Baolina kitra vehivavy Divison Elite 1 2018 Nahazoam-bokatra indray ny andro faha-3
Nahazoam-bokatra indray ny andro faha-3 amin’ny baolina kitra vehivavy Division Elite 1 notontosaina tany amin’ny kianjan’ny Velodrôme Antsirabe omaly zoma 18 mey 2018.
Miantehitra amin’ny lazon’ady !
Mbola mahita lalan-kivoahana ihany ve ny fanjakana Rajaonarimampianina eo anatrehan’ny toe-draharaha ankehitriny ? Amin’ny lafiny iray tena mikoropaka sy tsy mahita izay hasiana ny tongony intsony, fa amin’ny lafiny ilany anefa dia tsikaritra ho midingin-drambo hatrany.
Fiatrehana ny fanadinam-panjakana Betsaka ireo sekoly efa miditra ao anatin’ny famerenana
Volana vitsy sisa dia higadona indray ny fotoana hiatrehan’ny zaza Malagasy ireo karazana fanadinam-panjakana eto amintsika. Amin’ny volana jona ho avy io, ohatra, no hanomboka ny adina ara-panatanjahantena BEPC ka saika efa miomana amin’izany avokoa ny sekoly rehetra, indrindra fa ireo tsy miankina.
Noraisin’ny Filoham-pirenena teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha omaly maraina ny iraka manokana roa nalefan’ny Filoha Afrikanina Tatsimo Cyril Ramaphosa, dia i Roelf Meyer sy Eby Ebrahim.
Fandaniana herinaratry ny Jirama Azo ahena hatrany amin’ny 30%
Azo atao tsara ny mampidina hatrany amin’ny 30% ny fandaniana herinaratra eto Madagasikara, raha ny nambaran’ny solotenan’ny orinasa matanjaka eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, Schneider Electric, Andry Ramaroson, eto amintsika.
Fifanarahana fifanaovan-tsonia eto Madagasikara Tsy mipaka mihitsy amin’ny fiainam-bahoaka
Mitohy hatrany ny fifanaovan-tsonia ataon’ny fitondrana amin’ireo fikambanana maneran-tany. Ny alarobia 16 mey teo no natao indray tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina ny fifanaovan-tsonia ho fiarahana miasa amin’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka sy ny rafitra iraisam-pirenena (système des Nations Unies).